विश्वभरबाट खोजी गरिएका १० कार ब्रान्डको सूची सार्वजनिक (विस्तृतसहित) - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
विश्वभरबाट खोजी गरिएका १० कार ब्रान्डको सूची सार्वजनिक (विस्तृतसहित)
Posted by Anup Subedi | १९ फाल्गुन २०७४, शनिबार ११:२२ |
१९ फागुन,काठमाडौँ । पहिलो पटक गुगलमा सर्च भएका कारहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलले २०१७ मा विश्वभरबाट खोजी गरिएका कार ब्रान्डहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
यो वर्ष धेरै चर्चामा हुने आकुरालगायत ब्रान्डहरु अग्रपंक्तिमा भने आउन सकेनन, यद्यपी ती ब्रान्डहरु मुख्य १० को सूची भने अटाउन सफल भएका छन् ।
अमेरिकी कार कम्पनी फोर्ड २०१७ मा सर्वाधिक खोजी हुने कार ब्रान्डको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । फोर्डले अटोनोमस तथा विद्युतीय कारमा पछिल्लो समय व्यापक लगानी विस्तार गरेको छ । कम्पनीले सवारी प्रविधिको विकासमा पनि निक्कै लगानी बढाएको जनाइएको छ ।
यी र यस्तै कारणले फोर्ड गुगलमा खोजी हुने कार ब्रान्डको पहिलो नंबरमा पर्न सफल भएको गुगलले जनाएको छ । फोर्डको न्यू जीटी कार हाल सम्मकै उत्कृष्ट कारका रुपमा रहेको छ ।
यो वर्ष कार ब्रान्ड लेक्सस सबै हिसाबले उकृष्ट देखिएको गुगलले उल्लेख गरेको छ । लेक्सस सर्वाधिक खोजी हुने कार ब्रान्डको दोस्रो स्थानमा पर्नुमा यो ब्रान्डले ल्याएको हाइब्रिड टेक्लोलोजी र फस्ट–क्लास स्पोर्टस् कार भएको गुगलले जनाएको छ ।
कोरियाली कार उत्पादक कम्पनी किया गुगलको धेरै खोजी हुने कार ब्रान्डको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । २०१७ मा कियाका कार र कन्सेप्टले धेरै मानिसलाई मोहित तुल्याएको गुगलले उल्लेख गरेको छ । कियाका कार एफोर्डेबल र निरो हाइब्रिडकार बजारमा आएका छन् ।
टोयोटा जापानी कार उत्पादक कम्पनी हो । टोयोटा गुगलको सर्वाधिक खोजी हुने कार ब्रान्डको सूचीमा चाथौ स्थानमा रहेको छ । टोयोटा २०१८ प्रति निक्कै आशावादी रहेको जनाइएको छ । कम्पनीले कन्सेप्ट कार सहित भविष्यको लागि धेरै सोचि रहेको देखिन्छ । टोयोटाले हावा रहित टायरको समेत परिकल्पना गरेको छ ।
किल्ली ब्लू बुक होन्डाको नयाँ सिभिक इएक्स कार विग प्यान रहेको जनाएको छ । जापानी कार निर्माता होन्डा गुगलको सूचीमा पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।
अमेरिकी कार निर्माता कम्पनी जनरल मोटर अन्तर्गतको कार ब्रान्ड ब्यूक गुगलको सर्र्वाधिकक खोजीने ब्रान्डको सूचीमा छैटौं स्थानमा रहेको छ । उपभोक्ता माझ गरिएको वार्सिक विश्वसनियता सर्भेबाट ब्यूकले ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो २०१७ मा । २०१६ मा विश्वसनिय कार ब्रान्डको सातौं स्थानमा रहेको ब्यूक गत वर्ष तेस्रो स्थानमा आइ पुगेको छ ।
अकुरा जापानी कार निर्माता कम्पनीको विलासी कार ब्रान्ड हो । यो कार ब्रान्ड सर्वाधिक खोजी हुनेको सूचीमा सातौं स्थानमा रहेको गुगलले उल्लेख गरेको छ । आकुराको टीएलएक्स ए–स्पेकबाट धेरै मानिस मोहित भएका छन् । यो मोडललाई फेवरेट कार रुपमा समेत लिइएको छ ।
टेस्ला अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी हो । टेस्लाले २०१७ मा आफ्नो मोडल–थ्रीमा केही समस्या झेलेको भएपनि गुगलको सार्वाधिक खोजीने कार ब्रान्डको आठौं नंबरमा पर्न सफल भएको छ । तथापी टेस्लाले ल्याएको इलेक्ट्रिक सेमि–ट्रक, न्यू रोडस्टारले थप चर्चा बटुलेको थियो ।
कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुन्डाइ पनि गुगलको धेरै खोजी हुने कार ब्रान्डको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । हुन्डाइ नवौं स्थानमा रहेको छ । हुन्डाइले भविष्यमा सेमि अटोनोमस ड्राइभिङ प्रणालीको विकास गर्न लागेको चर्चा ज्यादै रहेको छ । त्यस्तै हुन्डाइले होइड्रोजन–पावर्डयुक्त लक्जरी जिनेसिस ब्रान्डको कन्सेप्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
अमेरिकी कार ब्रान्ड डाज गुगलको सर्वाधिक खोजी हुने कार ब्रान्डको सूचीमा दशौं स्थानमा रहेको छ । डाजले ल्याएको २०१८ च्यालेन्जर एसआरटी डेमोनले चर्चा बटुलेको छ । यो कारमा अत्यन्त शक्तिशाली भी–एट इन्जिन प्रयोग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
Previousसडकमा फुटपाथ पसल नहट्दा सिंगो नगर क्षेत्र अस्तव्यस्त !
Next‘बुद्ध वाज बर्न ईन नेपाल’ टुँडिखेलमा यसरी उर्लियो जनसागर ! (१५ तस्विरमा हेर्नुहोस्)
बुढीगण्डकी आयोजनामा ढिलाई हुन्न : मन्त्री पुन
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १६:३८
माओवादीका सांसदले आफ्नै आधार भूमिमा कार्यक्रम गर्न सकेनन् !
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार १६:२४
श्राद्धको प्रसाद खाएका ४० जना बिरामी : केहीको अवस्था गम्भिर
११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०८:४८